မသေဆုံးသောဝိဉာဉ်… – PVTV Myanmar
🔺ကျွန်မ လဲကျသွားတဲ့ နေရာလေးနားမှာ
အခု ဆို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးလဲ ပြန်ဖွင့်ပြီ
🔺လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်လလောက်က
ရေ နဲ့ စားစရာတွေ လာလှု နေကျ
အခုဆို ကျွေးစရာ လူငယ်တွေ မရှိတော့
ခိုလေးတွေ အစာကျွေးနေလေရဲ့ ….
🔺ပြီးခဲ့ တဲ့ ၁၀ ရက်လောက်ထဲက
အခုဆို ကျွန်မ လဲကျခဲ့တဲ့
နေရာလေးမှာ ဘယ်သူမှ အမှတ်တရ
နေပါစေ ရပါတယ် ပန်းတွေက အရေးမှမကြီးတာ
🔺နေ့နေ့ ညည ဆိုင်းဘုတ်အဝါလေး
ကျွန်မ အပေါ် အရှိန်နဲ့ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့
ကားတွေသာ ရှောင်ရခက်လို့ ငိုချင်နေတာ ….
ညကြီး မိုးတွေအရမ်းရွာလျှပ်စီးတွေ လက်တော့
မိုးရေတွေ ကျွန်မ ကို ဘာလို့မစိုသလဲ ဆို
🔺အိပ် ငိုက် နေရာက နိုးလာတော့
နံနက်ခင်း လေပြေ ထဲ ပိတောက် ရနံ့တွေ
အို ပျော်လိုက်ရတာ ….
🔺ဒီနေ့ မနက် စည်ပင်က အဒေါ်ကြီးနှစ်ယောက်
◾◾” ဒီနေရာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်
သေထားတယ် ” တဲ့◾◾
🔺No .. no ကျွန်မ အခုမှ ၁၉ နှစ် နော်
ကျွန်မမှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့ အဖေ နဲ့
ကျွန်မ အများကြီး ဆက်သွားရမှာ သိလား …
🔺သြော် … အခု ဒီနေရာလေးမှာ
နေ့နေ့ ညည မထတမ်း ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုင်
ထိုင်နေတာက ကျွန်မ ယုံကြည်ရာ ကို
🔺ဘယ်သူပါပါ မပါပါ အဆုံးထိ တိုက်မယ်
ကျွန်မ မသေ သေးဘူးနော်
ကျွန်မ ကို သေတယ်လို့ မပြောကြပါနဲ့
ဝမ်း နည်း အား ငယ် လွယ် လို့ ပါ ရှင်
♦️အသက်ပေးလိုက်ရသော သူများကို သတိရပါ ♦️
❣️နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးသွားကြလေပြီးသော အာဇာနည်အပေါင်းအား ဦးညွတ်ဂါရဝပြုအပ်ပါသည်❣️
Like – 6K Share – 453
2021-04-20 at 12:54 PM
Saw Pyit Kaung Lay says:
သေဆုံးပြီးသွားတဲ့သူကိုတော့ မကျွတ်မလွတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ခံစားပြီးမရေးပါနဲ့လားဗျာ၊ (သူ့မိဘ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို လေးစားသောအားဖြင့်ပေါ့)
2021-04-20 at 1:01 PM
Everthing will be okay 😭❤
Nini Kyaw says:
2021-04-20 at 1:16 PM
တရားေသာ စစ္ပြဲမွာ ေသဆုံး ခဲ႕သူမ်ား အားလုံး သို့
မိတ္ေဆြ /သူငယ္ခ်င္း /ေမာင္ငယ္ညီမငယ္ အားလုံး ဟာ က်ြန္မတို့ ရင္ထဲမွာ ဘယ္ေသာအခါ မွ ေသးဆုံး သြားတာ မဟုတ္ခဲ႕ပါဘူး ကြယ္ ေန့စဥ္ ႏွင့္အမ်ွ ကြယ္လြန္သူ မ်ား ပုံေလး ေတြကို ေတြ႔မိတိုင္း က်ြန္မ ေသခ်ာ ႀကည့္မိပါတယ္ ဘယ္ေသာအခါ မွ မ်က္စိ ထဲက ေျပာက္ကြယ္မသြား ခဲ႕ပါဘူး
မင္းတို့ က ေသဆုံး သြားခဲ႕တာ မဟုတ္ဘူးေနာ တရားေသာစစ္ ကို ေတာင္းဆိုေနႀကပါ လႊတ္လပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုေနႀက မို့လား အမွန္တရားနဲ႕ လႊတ္လပ္ ကို
အမွန္တကယ္ ရမွသာ မင္းတို့ ေတာ္လွန္ေရး ျပီးဆုံး မွာမို့ ရသည့္အထိ မင္းတို့နဲ႕အတူ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနႀကတယ္ေနာလို့ က်ြန္မ
သူတို့ ေလးေတြ မ်က္ႏွာကိုေသခ်ာ ႀကည့္ျပီး အျမဲ ေျပာေနမိတယ္
ဘဝ မွာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ဆိုတဲ႕ အရာေတြ မရွိႀကတဲ႕ အရြယ္ ေလ
ျဖဴစင္ သန့္စင္တဲ႕ ဘဝ ပိုင္ရွင္ေတြ ဆိုတာ က်ြန္မတို့ အားလုံး သူတို့ေလးေတြ အေႀကာင္း သိေနႀကတာ မို့ သူတို့ေလးေတြ အားလုံး
ေကာင္းကင္ ထက္မွာ ႀကယ္ေတြ အျဖစ္နဲ႕ ေနႀကမယ္ဆိုတာ က်ြန္မ ယုံႀကည္ တယ္
က်ြန္မတို့ အားလုံးက လႊတ္လပ္ခြင့္နဲ႕
ျငိမ္းခ်မ္း ျခင္းကို ေႏြဦး ေတာ္လွန္ေရးမွာ တမန္လြန္ အတြက္ လက္ေဆာင္ျပန္ပို့ ႀကရေအာင္ေနာ
2021-04-20 at 1:17 PM
ဒို့ ပြည်သူ တွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာကြယ်စင်နဲ့တကွအရေးတော်ပုံတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအသက်ပေးသွားခဲ့ကြသောသူရဲကောင်းတွေအမြဲရှိတယ်
2021-04-20 at 1:24 PM
Naw Eah Mu Phaw says:
2021-04-20 at 1:30 PM
2021-04-20 at 1:48 PM
2021-04-20 at 2:11 PM
I feel depressed and so sad for her. 😭😭😭
2021-04-20 at 3:33 PM
နွေဉီးအာဇာနည်တွေက ရုပ်တရားတွေကျဆုံးသွားပေမဲ့ နာမ်တရားတွေကိန်းပြီ အရေးတော်ပုံအောင်တဲ့အထိ ပါဝင်ဆင်နွဲချင်ရင် ဆင်နွဲခွင့်ရအောင် စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးမှ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ပြီးမှ
ကျဆုံးအာဇာနည်တွေကို အမျှအတန်းဝေပြီ RIP
ခုအချိန်တော် Rest in Power.. . Fighting ပါ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်👊
Whatagreat poem ! Let us fight on !
နားထောင်ရတဲ့ ဝမ်းနည်း လိုက်တာ 😌😭😢
2021-04-20 at 4:31 PM
Ama Yar says:
2021-04-20 at 5:31 PM
Popo Than Tin says:
2021-04-22 at 1:07 PM
2021-04-23 at 11:53 AM